काठमाडौं । नेपाल फाउण्डेशनमा अध्यक्ष विकास कुमार ठाकुर दशैं मनाएर काठमाडौं फर्किदैं थिए । असोज १९ गते सर्लाही पुगेर २४ गते काठमाडौं फर्किदैं थिए । त्यही बेलुका काठमाडौं नजिक फर्पिङबाट उनी नेपाल प्रहरीको नियन्त्रणमा परे ।दशैं मनाएर कर्मथलो काठमाडौं फर्किने क्रममा एकाएक विना कारण अपहरण शैलीमा प्रहरीले पक्राउ गरेर उनलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरमा राखियो । उनले आफु पक्राउ परेको बारे पटक–पटक जानकारी मागे । तर प्रहरी अधिकारीले ‘तपाईलाई सोधपुछका लागि हामीले गिरफ्तार गरेका छौं । फेसबुकमा किन नचाहिने कुरा लेख्नु हुन्छ ?’ भन्ने जवाफ दिइयो ।प्रहरीको उक्त अभिव्यक्ति सुनेर उनी चकित परे । उनी भन्छन्, ‘आजसम्म मैले देश बिरुद्धमा कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन् । चाहे तो सामाजिक सञ्जाल होस वा कुनै सार्वजनिक मञ्च ।’ पक्राउ परेर भ्यानमा बसाउँदै गर्दा सोधपुछ गरेर राति नै रिहा गरिदिन्छौं भनिएको थियो । तर उनलाई तीन दिनसम्म मानसिक यातना दिएर हिरासतमा राखियो ।असोज २४ मा पक्राउ परेका ठाकुरलाई प्रहरीले असोज २६ मा रिहा गरेको थियो । विना कारण आफु किन पक्राउ परियो भन्नेबारे ठाकुरले प्रहरीप्रशासनसँग प्रश्न गरेका छन् ।उनले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा २० (१) ले नागरिकलाई न्याय सम्बन्धी हक प्रदान गर्दै भनेको छ की कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन् । त्यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा ९ (१) अनुसार कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा त्यसको कारणबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यो राज्यले केको आधारमा संविधानले मलाई प्रदान गरेको न्याय सम्बन्धी हक खोस्ने धृष्टता गर्यो ? संविधानको कुन धारालाई टेकेर तीन दिनसम्म मलाई स्वेच्छाचारी हिरासतमा राखियो ?’
२९ आश्विन २०७६, बुधबार १९:१०
काठमाडौं । नेपाल फाउण्डेशनमा अध्यक्ष विकास कुमार ठाकुर दशैं मनाएर काठमाडौं फर्किदैं थिए । असोज १९ गते सर्लाही पुगेर २४ गते काठमाडौं फर्किदैं थिए । त्यही बेलुका काठमाडौं नजिक फर्पिङबाट उनी नेपाल प्रहरीको नियन्त्रणमा परे ।
दशैं मनाएर कर्मथलो काठमाडौं फर्किने क्रममा एकाएक विना कारण अपहरण शैलीमा प्रहरीले पक्राउ गरेर उनलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरमा राखियो । उनले आफु पक्राउ परेको बारे पटक–पटक जानकारी मागे । तर प्रहरी अधिकारीले ‘तपाईलाई सोधपुछका लागि हामीले गिरफ्तार गरेका छौं । फेसबुकमा किन नचाहिने कुरा लेख्नु हुन्छ ?’ भन्ने जवाफ दिइयो ।
प्रहरीको उक्त अभिव्यक्ति सुनेर उनी चकित परे । उनी भन्छन्, ‘आजसम्म मैले देश बिरुद्धमा कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन् । चाहे तो सामाजिक सञ्जाल होस वा कुनै सार्वजनिक मञ्च ।’ पक्राउ परेर भ्यानमा बसाउँदै गर्दा सोधपुछ गरेर राति नै रिहा गरिदिन्छौं भनिएको थियो । तर उनलाई तीन दिनसम्म मानसिक यातना दिएर हिरासतमा राखियो ।
असोज २४ मा पक्राउ परेका ठाकुरलाई प्रहरीले असोज २६ मा रिहा गरेको थियो । विना कारण आफु किन पक्राउ परियो भन्नेबारे ठाकुरले प्रहरीप्रशासनसँग प्रश्न गरेका छन् ।
उनले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा २० (१) ले नागरिकलाई न्याय सम्बन्धी हक प्रदान गर्दै भनेको छ की कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन् । त्यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा ९ (१) अनुसार कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा त्यसको कारणबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यो राज्यले केको आधारमा संविधानले मलाई प्रदान गरेको न्याय सम्बन्धी हक खोस्ने धृष्टता गर्यो ? संविधानको कुन धारालाई टेकेर तीन दिनसम्म मलाई स्वेच्छाचारी हिरासतमा राखियो ?’
Bikash Thakur, नेपाल फाउण्डेशन, पक्राउ, विकास कुमार ठाकुर
Prevजब देउवाले ओलीसँग हात मिलाउन मानेनन् (भिडियोसहित)
आज दिनभरका केन्द्रबिन्दु टप ५ समाचार (भिडियोमा)Next